खगेन्द्र संग्रौलालाई विश्वप्रकाशको प्रश्न– 'सरकार ढाल्न किन हतार ?'
सागर चन्द काठमाडाैं, ७ असाेज
इलाम साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिन (४ असाेज) नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मा र विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला बहसमा उत्रिए । बहसको विषय थियो, ‘के गणतन्त्र खतरामा छ ?’
बहसको सम्पादित अंश:
पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका नेताहरू गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको कुरा गरिरहन्छन् । गणतन्त्र सखाप पार्न प्रतिगामीहरू लागेको बताउँछन् । नेपाली इतिहासका अनेक उतारचढाव, अनेक संघर्ष पार गर्दै प्राप्त गणतन्त्र साँच्चिकै खतरामा परेको हो त ? भन्दै सहजकर्ता वसन्त बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाशलाई प्रश्न गरे । प्रश्नको जवाफमा शर्माले भने–
‘गणतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर हामीले आवश्यकताभन्दा बढी नै आशंका राख्यौं । गणतन्त्रमाथि खतरा नागार्जुनको जंगलबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सजिलै पार्न सक्ने अवस्था छैन । कामरेड विप्लवले भन्नुभएजस्तो वैज्ञानिक समाजवादका लागि उहाँलाई विश्वासमा लिएर यही प्रणालीभित्र ल्याउन सकिन्छ । उहाँको अगुवाइमा यस (गणतन्त्र) ले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था हुने छैन ।
गणतन्त्र भनेको एउटा प्रक्रिया हो, अर्को प्रवृत्ति हो । यदि गणतन्त्रको प्रक्रियालाई हामीले जीवनशैली बनाएनौं भने र यसको प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरालाई हामीले पहिचान गरेर अगाडि जान सकेनौं भने गणतन्त्रलाई खतरा अरू कसैबाट होइन, हामीबाटै हुन सक्छ ।’
शर्मापछि बोल्ने पालो आयो विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाको । हाम्रो समयका सबैभन्दा निर्भीक लेखकको परिचय बनाएका संग्रौला गणतन्त्रमाथिको खतरामाथि यसो भन्छन्–
यो बडो अनौठो हो । गणतन्त्रमाथि खतरा छ भनिरहेका बेला म आफैं विस्मृत भएको छु । मेरा केही प्रश्न छन्, दुईतिहाइको संविधान बनेको छ । भनिएको के छ भने यो दुईतिहाइको संविधान समग्र विश्व ब्रह्माण्डमा उत्कृष्ट छ । दुईतिहाइको सरकार छ । यो संविधानअन्तर्गत सरकार छ ।
त्यही सरकारको प्रभावमा रहेका सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा त त्यसकै मातहतमा छन् । राज्य संयन्त्र, राज्य संरचनाका सबै संरचना सरकारकै मातहत छन् । राज्यको कानुन, सेना, प्रहरी, बन्दुक, कोष सबै सरकारको नियन्त्रणमा छ । अब भन्नुहोस्, गणतन्त्रमाथि खतरा कसबाट छ ? जवाफ दिन मञ्चमा उक्लिएका संग्रौलाले उल्टै प्रश्न गरे । त्यसपछि उनले आफ्नो प्रश्नको जवाफ सांकेतिक रूपमा दिँदै भने–
गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने उद्गार जसको मुखबाट निस्किरहेको छ, त्यो ठूलो भयको अभिव्यक्ति हो । यस्तो अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा त्रास छ ।
यो त्रास के हो ?
शासकहरूको अकर्मण्यता । तिनको अलोकप्रियता । तिनले गरेको स्वेच्छाचार । देशभर भएका अन्यायहरूलाई न्याय नदिएको । बजारभाउ नियन्त्रण नगरेको । सामान्य जनताको सुरक्षा, सुविस्ता गर्न नसकेका कारण तिन (शासक) को मनमा अलोकप्रियताको भय उत्पन्न भएको छ । त्यही भयको आशंका हो यो ‘गणतन्त्रमाथि खतरा’ भनेको ।
गणतन्त्र खतरामा छ भने नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) डब्बलबाट छ । कि नेपाली कांग्रेसबाटै छ । अन्तबाट म खतरा देख्दिनँ ।
जस्तो तपाईं राजाको कुरा गर्नुहोला, नेपालको राजतन्त्र भनेको इतिहासको मसानघाटमा गाढेको मूर्दा हो । मसानघाटमा मूर्दा गाढिसकेपछि त्यसको नलिखुट्टो फुकेर प्राणको विष्टा हुँदैन । बाँकी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन लागेका केही बबुराहरू थिए, तिनीहरू आत्मविज्ञापन गर्दागर्दै खिइएर साना हुन लागेको देख्छु ।
मधेसी दुई नम्बरको नागरिक छन् । जनजाति संविधानभित्र उपेक्षित छन् । दलितका आफ्नै दुःख छन् । महिलाका आफ्नै दुःख छन् । त्यसैले यी झिनामसिनाहरूबाट गणतन्त्रलाई खतरा छैन । यदि खतरा छ भने सबैभन्दा ठूलो खतरा अहिलेको नेकपा डब्बलको नेतृत्वबाट छ ।
संग्रौलाको जवाफपछि सत्तारुढ दलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्न सकिए पनि नियतमाथि प्रश्न गर्न त अलिक कठिन होला नि भन्दै बस्नेतले प्रश्न गरे । जवाफमा संग्रौलाले भने–
‘सबैभन्दा विस्मयकारी कुरा त अहिले भन्ने गरिएको, ‘गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ नै हो । गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गर्नेहरूलाई बघिनीजस्तो जाइलाग्ने जो भनिएको छ ।
गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने बहानामा, लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भन्ने बहानामा हाम्रा अधिकार र संविधानको दायरालाई संकुचित बनाउने धेरै ठूलो खतरा छ ।
सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा त के छ भने जे–जे कुरालाई उपेक्षा गरिनुपर्थ्यो, त्यही कुरालाई भुतजस्तो बनाएर, बाघजस्तो बनाएर, उछालेर जनता तर्साउने काम गरिएको छ । त्यसैले जे भनिएको छ, त्यो वास्तविकता होइन । जे भनिएको छ, त्यो अन्तरको भय नै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
‘नेपाली कांग्रेसबाट खतरा छ ? यदि छैन भने कसबाट छ त खतरा ?,’ संग्रौलाको जवाफपछि बस्नेतले कांग्रेस प्रवक्ता शर्मालाई प्रश्न गरे ।
संग्रौलालाई स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा अर्थ्याउँदै शर्मा भन्न थाले–
म संग्रौला सरलाई स्थायी प्रतिपक्ष भन्छु । राजनीतिक दलको रूपमा हामी न सत्तामा स्थायी रहन्छौं, न स्थायी प्रतिपक्ष नै रहन्छौं । प्रतिपक्षबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्ने कुरा आयो । यसो सोचौं त, प्रतिपक्षी पार्टीको प्रवक्ता अहिले साहित्यिक मञ्चमा देखिँदैन थियो । ४८ देखि ५० सम्मको प्रतिपक्ष एमाले टायर बालेर सडकमा थियो ।
जिम्मेवार प्रतिपक्षले संसदमा सालिन ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले सधैं विचार गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, जनमानसले हामीलाई बाहिर राखेको छ । लोकतन्त्रमा बहुमत जसले लिएर आउँछ, उसले सरकार चलाउँछ ।
बहुमत छ तर विवेकलाई बहुमतले नकुल्च । बहुमत र विवेकमा प्रधान विवेक हो । त्यसैले बहुमतका साथ शासन गर्दा विवेकलाई केन्द्रमा राखेर शासन गर भन्ने प्रतिपक्षले अपिल गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले सम्झाउनुपर्छ कि दुईतिहाइ बहुमत त हिटलरसँग पनि थियो नि ।
यदि प्रतिपक्ष कमजोर भएको हो भने कमजोर प्रतिपक्ष नै स्वीकार्य छ । इलाम बजार बन्द गरेर सडकमा टायर बालेर धूवाँको पारि सत्ता र वारि प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ भने माफ गर्नुहोला, यस्तो प्रतिपक्षले यो देशको हित गर्न सक्दैन । त्यसैले यो बेलामा प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएको कुरालाई कमजोर भएको रूपमा नलिऊँ ।
सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै जिम्मेवार भएर चल्नुपर्छ । यस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षबाटै गणतन्त्रमाथि खतरा देख्नुहुन्छ ? यदि गणतन्त्रमाथि साँच्चिकै खतरा छ भने प्रतिपक्ष सडकमा आउन तयार छ । अहिले प्रतिपक्षलाई सालिन रहन दिनुहोस्, यसले गणतन्त्रलाई खतरा होइन, सहयोग नै पुर्याइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलका नेता पुष्पकमल दाहालले बारम्बार आफ्नो ज्यानमाथि खतरा छ भन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार सर्वदलीय बैठक बोलाएर गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्छन् । यति गम्भीर कुरा त्यत्तिकै आएको हो त त्यसो भए ? यी अभिव्यक्तिको अन्तर्यमा के देखिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा शर्मा भन्छन्–
म सोध्छु, यो देशको उच्च ओहोदामा रहेका कमरेड प्रचण्डको ज्यानमाथि खतरा छ भने सरकारले भन्नुपर्‍याे– कोबाट खतरा छ ?
सेना आफूसँग, प्रहरी आफूसँग, सशस्त्र आफूसँग छ । सयौंको संख्यामा सुरक्षा घेरमा बस्दा पनि उच्च ओहोदामा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्रीको ज्यानमाथि खतरा छ भने विश्वप्रकाश शर्माले होइन, जवाफ कमरेड केपी ओलीले दिनुपर्छ ।
त्यसैले नेताहरूले अतिरन्जनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन । नेताहरूले बोलिसकेपछि होइन, सोचिसकेपछि बोल्नुपर्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, हाम्रो प्रवृत्ति गणतन्त्रअनुकूल पो छैन कि ? खतरा त हाम्रो प्रवृत्तिबाट छ ।
शर्माको जवाफ नसिकिँदै संग्रौला बोल्न थाले–
सत्ताधारीहरूले गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्दा दुई कुराकाे संकेत गरेका छन् । एउटा राजावादीहरू, अर्को नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) बाट । अनि बीचमा रवि लामिछाने, सानो ज्ञानेन्द्र पनि आएका छन् । गणतन्त्रमाथि खतराका यी चारवटा कोण देखाइएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि ठूलो त होइन, स–सानो खतरा देखेको छु । कांग्रेसभित्र एक किसिमको विचलन र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने केही कुराहरू देखेको छु ।
राजावादीहरू दुई थरी छन् । एक थरी हक्की राजावादी छन् । अर्को थरी लजालु राजावादी छन् । हक्की राजावादीहरू सिधै राजा चाहियो भन्छन् । लजालु राजावादीहरू हिन्दु राष्ट्र चाहियो भन्छन् ।
विश्वप्रकाशजीको महासचिव शशांक कोइराला बीपीपुत्र हुनुहुन्छ । उहाँले हिन्दु राष्ट्र चाहियो भनिरहनुभएको छ । उहाँ लजालु भएको हुनाले राजतन्त्र चाहियो भन्न सक्नुभएको छैन । तर, तपाईंले हिन्दु राष्ट्र भनिसकेपछि त्यो प्राप्त भएपछि तपाईंको अर्को दाबी त राजा नै हो नि ।
नेपाली कांग्रेस मित्र कोइरालाले लजालु भएर भनिरहनुभएको छ । तर, त्यहाँभित्रका धेरै मान्छेको मनभित्र यो कुरा छ तर भन्न सकिरहेका छैनन् । यी लजालु मात्रै होइनन्, कायर पनि छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको यो प्रवृत्तिले गणतन्त्र खान्छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । किनभने नेपाली कांग्रेस नेपालको आदि प्रजातन्त्र पार्टी हो । नागरिक अधिकारको कुरा गर्ने पहिलो पार्टी हो ।
बीपी कोइराला धर्मनिरपेक्ष थिए । उनकै पुत्रले हिन्दु राज्य चाहियो भन्नुहुँदैछ । यो भन्ने त कमल थापा नै छ नि भाइ ! कमल थापाले गर्ने काम आदि प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक बीपीपुत्र शशांकले किन गर्नुपर्‍याे ?
मैले एकचोटि ट्वीटमा ठट्टा गरें– ‘यदि शशांकले यो कुरा (हिन्दु राष्ट्र) भनिरहने हो भने शशांक गुट कमल थापामा गएर मिले भयो । अथवा कमल थापालाई शशांक गुटमा भित्र्याए पनि भयो ।’
संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसलाई घुमाएर प्रहार गरे । संग्रौलाको बोली कडा हुँदै गर्दा संग्रौलालाई रोक्दै बस्नेतले शर्मालाई प्रश्न गरे, ‘खगेन्द्र दाइले घुमाएर दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसभित्र आलोचना पचाउन कति सजिलो छ ?’
शर्मा पनि के कम संग्रौलालाई घुमाएरै आलोचना गर्न थाले–
लोकतान्त्रिक संस्कारमा हामी विश्वास गर्छौं । अब यो कम्युनिस्ट दर्शनमा जवाफ त हुन्छ, प्रश्न हुँदैन । उत्तर कोरियामा प्रश्न हुँदैन, जवाफ मात्रै हुन्छन् । किनभने त्यहाँ ७० वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ । जहिले पनि उही माक्र्सवाद भनेर उही लालसलाम भनेर चल्छ ?
खगेन्द्र संग्रौलामै पनि कम्युनिष्ट दर्शनको ह्याङओभर बाँकी नै छ । बाबुरामभन्दा उहाँ बौद्धिक नै हो । तर, बाबुरामलाई कम्युनिस्ट दर्शन गलत रहेछ भनेर बुझ्न ४० वर्ष लाग्यो ।
कांग्रेसभित्र सबै खाले मत आउँछन् । आउन पाउँछन् । तर, कांग्रेसको निर्णय बद्लिँदैन । नेपालको संविधानमा कांग्रेस पक्का छ । कांग्रेसभित्र कसैले फरक दृष्टि राख्दैमा कांग्रेसबाट खतरा छ भन्ने बुझ्नुहुँदैन ।
शर्माले आफ्नो भनाइ राखिसकेकै थिएनन्, संग्रौला बोल्न थालिहाले–
कांग्रेस अन्तरविरोधग्रस्त पार्टी हो । कांग्रेसलाई म त गुटहरूको संग्रह भन्थें, तर विद्वान् नेता प्रदिप गिरीले नै कांग्रेसलाई गिरोहको संग्रह भने । गिरोह भनेको आपराधिक र भिजिलान्तेको समूह हो ।
मैले एक जिन्दगीमा ७ वटा राजा फटाएँ । व्यवस्थाको संख्याका हिसाबले म धेरै लामो जिन्दगी बाँचे । पञ्चायतमा पढें र पढाएँ । पञ्चायतमा देशै एउटा सिङ्गो कारागार थियो । त्यही समयमा म माक्र्सवाद र चीनबाट प्रभावित भए । मेरो जिन्दगीभरिको लडाइँ, (साहित्य, राजनीतिमा, विचार, कला, हिमाल, पहाड तराईमा) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ।
तपाईंहरूका धेरैका जस्तै मेरा पनि सपना थिए । गणतन्त्र भनेको गणहरूको शासन हो । गणले लोकतान्त्रिक विधिबाट नेताको चयन गर्छ । चयन गर्ने र चयन हुने दुवै एकअर्काप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
अहिले प्राविधिक दृष्टिबाट नेपालमा गणतन्त्र छ । संविधानले विधिवत रूपमा स्थापित गरेको छ र घोषित गरेको छ । तर, व्यवहारमा त डेढ तन्त्र छ । खड्गप्रसाद ओली एक, पुष्पकमल दाहाल आधा । यी दुईको योगफल डेढ । त्यसैले यो डेढतन्त्र हो, लोकतन्त्र होइन ।
मलाई सबैभन्दा विस्मय लाग्ने कुरा के हो भने गणतन्त्रको कुरा जसले उठायो, गणतन्त्रको मुद्दालाई निस्तेज पार्ने बाटोमा पनि त्यही लागेपछि मलाई दुःख लागेको छ, अरूप्रति होइन, आफैंले आफैंप्रति खेद छ । कहिलेकाहीँ विषाद लाग्छ ।’
आफैंप्रति निराश भएका संग्रौलालाई बस्नेतले संविधानतर्फ डोर्याए । थोरबहुत अपूर्णतासहितको संविधान हामीले स्वीकारेका हौं भन्दै बस्नेतले संविधानका उज्ज्वल पक्ष पनि छन् भने । तर, संग्रौलाले भने संविधानका अपूर्णता र असन्तुष्टितर्फ नै बढी जोड दिँदै भन्न थाले–
ओली र पुष्पकमल सत्तासिन भइसकेपछि उहाँहरूले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कुरा थियो संविधान संशोधन । संविधानप्रति सबैका असन्तुष्टि थिए । मधेसी, दलित, जनजाति संविधान निर्माणमा बाहिर थिए । तर, संविधान अहिलेसम्म संशोधन भएन ।
असन्तुष्टि सम्बोधन नभएको हुँदा नेपाली समाजमा पहिला जेजस्तो विभाजन थियो, त्यो अहिले पनि कायमै छ ।
संग्रौलाका कुरामा सही थाप्दै असन्तुष्टि संविधानप्रति मात्र होइन, नागरिकको दैनिक जीवनशैलीमा पनि देखा पर्न थालेको भन्दै शर्मा भन्छन–
नेपाल इतिहासको सुन्दर कालखण्डमा छ । म प्रतिपक्षी पार्टीको कार्यकता हुँ । मेरो पार्टी र मैले चुनाव हारेका छौं । हामीले नागरिक समाजको सहभागिताका साथ चुनाव गर्यौं । संविधान बनाएका छौं । यही साझा प्रयत्नले स्थिर सरकार बन्यो ।
जिम्मेवार ढंगले जानुपर्ने समयमा हामी क्रमशः केही गल्ती गर्दैछौं । नेकपासँग बहुमत थियो । तर, उहाँहरूले बहुमतमाथि दुईतिहाइको श्रीपेच लगाउनुुभयो । दुईतिहाइको सिन्दुर लगाउन उपेन्द्र यादवको पार्टी ल्याउनुभयो । अनि यादवले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खुटा हल्लाउनुभयो । संविधान संशोधनको प्रयास उहाँले गर्नु भएन ।
मधेसले आफ्नो पानीको पहिचान मागेको हो । जनजातिले पसिनाको पहिचान मागेको हो । हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा एमाले राष्ट्रवादी बाटो हिँड्यो । कुनै समय संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका प्रचण्ड अहिले बोल्नु हुन्न ।
यता जनता रवि लामिछानेको जुलुसमा निस्केका छन् । यो जुलुस हामीप्रतिको अविश्वास हो, कानुन, प्रहरी, संयन्त्रप्रतिको अविश्वास हो । तर, सत्तारूढ दल भने यसलाई प्रतिगामी तत्त्व भन्दै उम्किन खोजिरहेको छ ।
यही जनतालाई हामीले सडकमा आन्दोलन गर्न आऊ, गोली थाप्न आऊ भन्दा आउँछन्, अनि त्यतिखेर जनता ठीक । लाम लागेर हामीलाई भोट हाल्दा ठीक । रवि लाछिानेको पक्षमा जुलुस निस्कँदा बेठीक ।
नागरिकलाई सत्ताले प्रश्न थालेपछि, प्रश्न उठाउनेहरूमाथि अरिंगाल जसरी जाइ लाग भन्न थालेपछि नागरिकमा वितृष्णा नभएर के हुन्छ ? त्यसैले जनमानसमा उठेका प्रश्नलाई सत्ताले सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रतिपक्ष यसमा सहयोग गर्न चाहन्छ । जनताबाट उठेको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गरियो भने जनतामा वितृष्णा हुन्छ ।
‘खासमा गणतन्त्रमाथि खतरा ज्ञानेन्द्र शाहबाट छ कि सडकमा देखिएका नयाँ ज्ञानेन्द्र शाहीबाट ?,’ बस्नेतले प्रश्न गरे ।
जवाफमा संग्रौला भन्न थाले–
हामीहरू धेरैलाई थाहा छ । पञ्चायतमा एउटी नानीमैया दाहाल भन्ने थिइन् । उनले धेरै पढेकी पनि थिइनन् । उनको कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि थिएन । तर, उनी पञ्चायतमा चुनावमा उठिन् ।
चुनावमा उठेपछि नानीमैयाको वरिपरि संसार ओइरियो । सारा मान्छे चकित भए । नानीमैया पनि जथाभावी बोल्थिन् र भन्थिन्, ‘म चुनाव जित्छु, मैले जितेपछि सूर्यबहादुर थापालाई फरिया उचालेर देखाइदिन्छु ।’
यो पञ्चायतप्रतिको अरूचि, असन्तुष्टि, चरम वितृष्णाको अभिव्यक्ति थियो । पञ्चायतप्रति नागरिकको मनमा जो औडाह उत्पन्न भएको थियो, जो वितृष्णा थियो, जो आगो थियो, त्यही ओकलिएको थियो ।
अहिले रवि लामिछानेको वरिपरि उन्मादी पागलपनका साथ मान्छेको सागर ओर्लिएको छ । त्यो अलिकति रवि लामिछानेको लोप्रियता पनि हो । अनि बढी सामान्य मान्छेको सत्ता र सुरक्षा निकाय, न्यायिक निकायप्रतिको अविश्वास पनि हो ।
संस्थाले संस्थागत काम गरेन भने । विधि विधिसम्मत ढंगले चलेन भने । नेतृत्व विधिसम्मत भएन भने उसका सम्पूर्ण काम विधिअन्तर्गत भएनन् भने अराजकता व्याप्त हुन्छ । भएका संस्था र संस्था चलाउने अलोकप्रिय भएको समयमा, संस्था र नेतृत्वप्रति विश्वास टुटेको समयमा जनता सडकमा आएका हुन् ।
मैले अनुमान गरेको थिएँ, यदि हाम्रो प्रतिपक्ष योभन्दा अलि बढी सशक्त भएको भए गुठी मुद्दामा यो सरकार ढल्थ्यो ।
गुठी मुद्दामा नगए पनि रवि लामिछानेको वरिपरि जे–जति मान्छे आएका थिए, त्यसलाई आफ्नो उचित नीतिअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले आह्वान गर्न सकेको भए, त्यसको माध्यमबाट आन्दोलन विस्तार गर्न सकेको भए खड्गप्रसादको राज जान्थ्यो ।
त्यसैले अहिले यो सत्ता अत्यन्त स्वेच्छाचारी हुनमा नेपाली कांग्रेसको दुर्बलता, त्यसको निस्तेजपना, त्यसको अकर्मण्यता र हस्तक्षेपको कमी पनि रहेका छन् । प्रतिपक्ष यो भन्दा अलिकति मात्रै बलियो भएको भए यसरी मनपरी गरिने थिएन । ओलीराजमा हाम्रा बोल्ने, लेख्ने अधिकार हरण गर्नका निम्ति अनेक किसिमका विधेयक ल्याइएका छन् ।’
‘प्रतिपक्ष बलियो भएको भए ?,’ बस्नेतले शर्मालाई प्रश्न गरे ।
‘प्रतिपक्ष कमजोर भएर राम्रो भएछ हौ खगेन्द्र सर । किनभने संग्रौला सरले भन्नुभयो– गुठी विधेयकमा प्रतिपक्ष भिडेको भए सरकार जान्थ्यो रे ।’
किन जानुपर्यो सरकार ? अरू देशमा सरकार बनाउँछन् चलाउनका लागि, हाम्रो देशमा सरकार बनाउँछन् ढाल्नका लागि । जनताले ५ वर्षका लागि मत दिएका छन्, चलाउन दिए हुन्न ? बरू राम्रोसँग चलाऊ भनेर भनौं ।
जहिल्यै सरकार ढलाउने कुरा तपाईंलाई चाहिँ किन मन लागेको हो ?
‘हामी हारेका छौं, प्रतिपक्ष भएका छौं, बसेका छौं, हामीलाई हतार छैन, तपाईंलाई चैं केको हतारो हो सरकार ढाल्ने ? जिन्दगीभर मन्त्री नखाने संकल्प खानुभएको छ अनि तपाईंलाई सरकार ढाल्न किन लाग्नुपरेको ?’
शर्माका प्रश्नपछि संग्रौला हाँस्दै जवाफ दिन थाले, ‘अहिले भइरहेको सरकार ढाल्न हुँदैन भनिरहनुभएको छ । यो नेपाली कांग्रेसको निरीहपना बोलिरहेको छ क्या ! प्रतिपक्षले सधैं सत्तापक्षका छिद्रहरू खोज्छ । छिद्र फेला पार्‍याे भने भ्वाङ बनाउँछ अनि जनतालाई उठाउँछ ।’
सरकार ढाल्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलभन्दा लेखकले बढी चासो देखाएपछि बस्नेतले शर्मालाई सोधे, ‘तपाईं कति प्रतिशत सत्तापक्ष, कति प्रतिशत प्रतिपक्ष ?’ कार्यक्रमको सुरूवातमै शर्माले राजनीतिक दल सधैं स्थायी रूपमा सत्ता र प्रतिपक्ष नहुने भनिसकेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘संग्रौला सर त स्थायी प्रतिपक्ष । हामी त राजनीतिक दल । राजनीतिक दल स्थायी रूपमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदैन ।’
बस्नेतको प्रश्नप्रछि शर्माले भने, ‘लोकतन्त्रको, संघीयताको संस्थागत गर्ने कुरा आउँदा, नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने कुरा आउँदा हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ८, २०७६, ०३:५५:००